Waxyaabo cusub oo ka soo kordhay safarkii Farmaajo ee Imaaraadka iyo lacag la sheegay in... - Caasimada Online
Home Warar Waxyaabo cusub oo ka soo kordhay safarkii Farmaajo ee Imaaraadka iyo lacag...
Waxyaabo cusub oo ka soo kordhay safarkii Farmaajo ee Imaaraadka iyo lacag la sheegay in…
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan booqasho ku tagay dalka Imaaraadka Carabtay oo faragelin qaawan ku sameysay dhulka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa Imaaraadka Carabta la galay heshiisyo qaarkood la shaaciyey iyo qaar kale oo la shaacin oo ahaa kuwa qarsoodi ah.
Kadib Wararkii ugu dambeeyey iyo xogta laga helayo safarkaas ayaa tilmaamayo inay dowladda Imaaraadka Carabta siisay Madaxweyne Farmaajo adduun lacageed oo gaarayo ilaa 100 Milyan oo Dollar.
Ujeedka lacagtaas ayaan si rasmi ah loo ogeyn, balse waxaa la qiyaasayaa inay Imaaraadka lacagtaas u bixisay sidii looga aamusi lahaa heshiiska ay kula wareegtay Dakadda iyo garoonka Magaalada Berbera.
Wararka ayaa intaas ku darayo in lacagta 100 Malyan ah ay inteeda badan tahay ballan qaadyo la siin doono dhawaan, halka bil kasta loo ballan qaaday in lasiin doono dowladda Soomaaliya ilaa 15 Malyan oo la sheegay in loogu talagalay mushaaraadka ciidamada Dowladda.
Wasaaradda Arrimaha dibadda soomaaliya ayaan faahfaahin buuxda ka bixin heshiiskaas iyo qodobda la isku afgartay, midaasna waxay keentay shaki ku aadan inay dowladda ka gaabsan doonto heshiiskii Berbera.
Sidoo kale Dowladda Imaaraadka ayaa ballan qaaday iyo gargaar bini,aadanimo soo gaarsiin doonto dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaatooday abaaraha ku dhuftay.